वैशाख १ नै नेपाली नयाँ वर्ष किन ? - NepalDainik
वैशाख १ नै नेपाली नयाँ वर्ष किन ?
नेपाली नयाँ वर्ष, (नेपालमा नयाँ वर्ष वा नववर्ष भनेर चिनिन्छ) विक्रम संवत् नेपाली पात्रो वर्षको पहिलो दिन हो। यो १ वैशाखको दिन हो, जुन अप्रिलको मध्यमा पर्दछ (सामान्यतया यो दिन अप्रिल १४ सँग मेल खान्छ) अन्तर्राष्ट्रिय पात्रो अनुसार, र यो वर्षको शुरुवात हो। नेपालमा मनाइने सबै नौवटा फरक फरक घटनाहरू मध्ये, यो प्राथमिक हो।
१ वैशाखलाई नेपाली नयाँ वर्ष किन ?
विक्रम संवत् पात्रोले सौर्य क्यालेन्डर प्रणालीलाई पछ्याउँछ, त्यसैले सूर्यले पूर्ण क्रान्ति गर्दा ३० ° को 12 राशि चिन्हहरू 360 ° बनाउँछ। अब जब यो आफ्नो अन्तिम राशि (मीन) बाट 360 पूरा गर्दै छ, तब सूर्य भर्खरै मेष भनिने नयाँ राशिमा प्रवेश गर्दछ। त्यसैले सूर्य भर्खरै मेष राशिमा प्रवेश गर्ने क्षणलाई हिन्दू विक्रम संवत्मा नयाँ वर्ष भनिन्छ।
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पछ्याउने विक्रम संवत् पात्रोको नयाँ वर्ष भए पनि नेपाल सरकारले यसलाई आधिकारिक नेपाली क्यालेन्डरका रूपमा मान्यता दिएकाले वैशाख १ गते सार्वजनिक विदा दिइन्छ । यो दिन अधिकांश हिन्दू मानिसहरूको लागि एक धार्मिक दिन हो, किनकि यो उनीहरूको धार्मिक पात्रो वर्षको सुरुवात हो। आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार स्थानीयहरूले बिहान सबेरै आफ्नो मन्दिरमा पूजा-आराधना गरेर समय बिताउँछन् र पूजा गर्छन् जुन आफ्ना देवताहरूको लागि समर्पित अनुष्ठान हो। पूजापाठ गरिसकेपछि घण्टी बजाएर घण्टी बजाएर घुम्ने गरी मन्दिर घुम्ने गर्थे । तर, मुलुकमा रहेको धार्मिक सहिष्णुता, शान्ति र सद्भावले सङ्केत गरेझैं सबै जातजाति, धार्मिक अल्पसंख्यकले पनि केही हदसम्म नेपाली नयाँ वर्ष मनाउने गरेका छन् ।
यस दिनले वर्षभरि सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू, विशेष गरी शैक्षिक र आधिकारिक कार्यक्रमहरूको सुरुवातलाई चिन्ह लगाउँछ। मानिसहरु यस दिनमा पिकनिक, घुम्न र यात्राको योजना बनाउँछन्। नयाँ वर्ष एक रमाइलो दिन उत्सव हो। साथीहरू र परिवार भेला हुन्छन् र पिकनिक वा दिन बाहिर व्यवस्थित गर्छन्। नेपाली नयाँ वर्षको उत्सव देशभरि सडक नृत्य, परेड र पुनर्मिलनहरू समावेश गर्ने रमाइलो गतिविधिहरूको साथ आउँछ। यस अवसरमा सँधै उत्साहजनक सहभागिता र संघसंस्था र व्यक्तिहरू द्वारा पूर्ण रूपमा आर्थिक सहयोग गरिएको छ। देशभरका पार्कहरू उत्सव मनाउने मानिसहरूले भरिएका छन्। विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी विशेषगरी आफ्नै राष्ट्रियताका कलाकारहरुको सांगीतिक कार्यक्रम गरी नयाँ वर्ष मनाउने गर्दछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ वर्ष जस्तै यहाँका जनताले नयाँ वर्षमा पनि नयाँ संकल्प गर्छन् । यसका साथै अन्य देशहरू जस्तै नयाँ वर्षको आगमनसँगै उनीहरूले पनि धेरै आशीर्वाद र समृद्धिको कामनाका साथ यो पर्व मनाउने गरेका छन् ।
HAPPY NEW YEAR 2079 B.S
नव वर्ष २०७९ सालको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !!!
PrevPreviousसत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको उमेदवार सिफारिस गर्न मापदण्ड बनायो
Nextसांघाई तालाबन्दी: आईफोन निर्माताले चीनका साइटहरूमा अपरेशनहरू रोक्योNext